आजका दिन ५ कुरा घरमा राख्नुहोस् वर्षभरि सफलता मिल्नेछ ! – Sandesh Munch
आजका दिन ५ कुरा घरमा राख्नुहोस् वर्षभरि सफलता मिल्नेछ !
May 24, 2020 498
आजका दिन तपाईहरुले घरमा यस्ता बस्तु राख्नाले अधिक सफलता पाउनु हुनेछ ।ज्योतिष शास्त्रका अनुसार सफलताको पछि मानिसको भाग्यको योगदान पनि हुन्छ । त्यसैले धेरैले भाग्यमा पनि विश्वास गर्छन् ।
१ सूर्यको प्रतिमा – आजको दिन सूर्यको प्रतिमा घरमा राख्नाले ज्ञान, तेज,शक्ति, बुद्धि प्राप्त हुनेछ । साथै आत्मा विश्वास पनि बढ्ने छ । यसलाई विशेष गरी पूजा कोठामा राख्दा उचित प्रतिफल प्राप्त हुनेछ । यसबाट तपाइको घरमा सूर्यको प्रकाश परि वर्षभरि पारिवारिक सुख मिल्नेछ ।
२ पैसा – २०७७ सालमा तपाईँले घरमा राख्नै पर्ने कुरा मध्य पैसा पनि एक हो । आफूसँग भएको पैसालाई आफ्नो पूजा कोठामा चढाउनुहोस् । चढाएको यो पैसालाई वर्षभरि खर्च नगर्नुहोस्। यसले तपाइको लक्ष्मी बढ्नेछ । यसबाट सकारात्मक ऊर्जा पनि प्राप्त हुनेछ ।
३ कछुवा – नयाँ वर्षको दिन घरमा कछुवा राख्नुहोला । कछुवालाई विशेष गरी घरको पूजा कोठामा राख्दा फलिफाप हुनेछ । यसलाई भगवान विष्णुको अवतार मानिन्छ । यसले तपाईँलाई दीर्घायुको कामना गरिरहेको हुन्छ ।
४ गोमती चक्र – तपाईँले घरमा राख्नै पर्ने अर्को बस्तु मध्य गोमती चक्र पनि एक हो । यसलाई तपाइले पर्स, दराज लगायत पूजा कक्षमा पनि राख्नुहोला । यसले बास्तुदोष निवारणको साथै घरमा लक्ष्मीलाई आमन्त्रित गर्दछ ।
५ मयुरको पोवाख – मयुरको पोवाख घरमा राख्दा पारिवारिक वातावरण, ज्ञान , प्रेम , मुद्दा मामिलाका साथै वैवाहिक जीवनमा सफलता प्राप्त हुनेछ । यसो गर्दा वर्षै भरि सफलता र उन्माद खुसी लिएर आउनेछ ।
Prevशुभ बिहानी मुक्तिनाथ मन्दिरको दर्शन गरि आजको राशिफल पढ्नुहोस्
Nextएका बिहानै कोरोनाले सयाैंकाे मृ’त्यु भइरहेका बेला नेपालमा फेरी भयो अर्को चमत्कार, सबै दंंग..पुरा पढ्नुहोस
‘सर्प सम्बन्धी १०सपना कुन शुभ कुन अशुभ
आयो फेरि अर्को दुखद समाचार कोरोनाले विदेशमा भएको नेपालीको एकै दिनमा ४९ जनाको निधन भने संक्रमित २००० जना
भक्तपुरको मध्यपुर थिमिमा समुदायस्तरमै को’रोना सं’क्रमण
श्रीमान बिदेशमा श्रीमती अर्कै संग कोठामा रङ्गे हात प्रकाउ (भिडियो सहित)